Wholesale FAQs - Hangzhou HEO Mutengesi & Mugadziri
Runhare / Whatsapp / Wechat: 008618157136026 Runhare: +86 57186162857
COVID-19 Inokurumidza Yekuedza Makaseti
Zvirwere Zvinotapukira Vanokurumidza Kuedza Makaseti
Ndeapi mitengo yako?
Mitengo yedu inochinjika zvichienderana nekuwanikwa uye zvimwe zvinhu zvemusika. Isu tinokutumira iwe yakagadziridzwa yemutengo runyorwa mushure mekambani yako kutibata nesu kuti uwane rumwe ruzivo.
Iwe une hushoma hwehuwandu hweodha?
Ehe, isu tinoda ese maodha epasi rese kuti ave neinoramba ichienderera shoma odha huwandu. Kana iwe uri kutsvaga kuti utengese asi mune zvidiki zvidiki zvidiki, tinokurudzira kuti utarise webhusaiti yedu
Unogona here kuendesa akakodzera magwaro?
Ehe, isu tinogona kupa akawanda magwaro anosanganisira Zvitupa zveKuongorora / Kuenderana; Inishuwarenzi; Kwakatangira, uye zvimwe zvinyorwa zvekutumira panodiwa.
Ndeipi avhareji lead nguva?
Kune sampuli, iyo inotungamira nguva ingangoita mazuva manomwe. For vakawanda kugadzirwa, kutungamirira nguva mazuva 20-30 mushure mekugamuchira dhipoziti muripo. Nguva dzinotungamira dzinoshanda kana (1) tagamuchira dhipoziti yako, uye (2) tine mvumo yako yekupedzisira yezvigadzirwa zvako. Kana yedu yekutungamira nguva isingashande neyako nguva yekupedzisira, ndapota enda pamusoro pezvaunoda nekutengesa kwako. Muzviitiko zvese isu tichaedza kugadzirisa zvaunoda. Kazhinji tinokwanisa kuzviita.
Ndedzipi nzira dzekubhadhara dzaunogamuchira?
Unogona kuita mubhadharo kubhangi account, Western Union kana PayPal:
30% dhipoziti pamberi, 70% mwero uchipesana nekopi yeB / L.
Chii chinonzi chigadzirwa garandi?
Isu garandi zvinhu zvedu uye nekushanda. Kuzvipira kwedu ndekwe kugutsikana kwako nezvigadzirwa zvedu. Muwarandi kana kwete, itsika yekambani yedu kugadzirisa nekugadzirisa nyaya dzese dzevatengi kugutsikana kwemunhu wese
Unovimbisa kuendesa zvakachengeteka uye zvakachengeteka zvigadzirwa?
Hongu, isu tinogara tichishandisa mhando yepamusoro kutumira kunze. Isu tinoshandisawo hunyanzvi kurongedza zvinhu zvine njodzi uye yakasimbiswa inotonhorera yekuchengetedza vafambi kune tembiricha inonzwika zvinhu. Nyanzvi kurongedza uye zvisiri-zvakajairwa kurongedza zvinodiwa zvinogona kuunza imwezve muripo.
Zvakadii nemari yekutumira?
Chikamu 201, Kuvaka 3, No. 2073 Jinchang Road, Yuhang Dunhu, Hangzhou, China